Usubhuliwe umlilo oqale eBetty's Bay ngoMgqibelo ebusuku | News24
Usubhuliwe umlilo oqale eBetty's Bay ngoMgqibelo ebusuku
Cape Town – Kugqabuke ilangabi endaweni yaseBetty’s Bay ngoMgqibelo ebusuku, kodwa abezicishamlilo sebeqinisekise ukuthi ubhulwe wonke umlilo.
Ngokusho komphathi wenhlangano eyaziwa ngeNeighbourhood Watch uJurika Rabie, kudingeke ukuba kukhishwe izakhamuzi ezindlini ezingu-15 ukuze zivikeleke njengoba abezicishamlilo bebematasa bezama ukubhula ilangabi.
IMeya yendawo yase-Overstrand uRudolph Smith, ozifikele mathupha kule ndawo uthe abezicishamlilo bakwazile ukuwubhula lo mlilo kungakenzeke umonakalo omkhulu.
ÖLUNYE UDABA:IZITHOMBE: Sekujutshwe namasosha ukuba azocima umlilo
“Abezicishamlilo basebenze ngokukhulu ukuzikhandla ukubhula lo mlilo ngoba ubuzodala omkhulu umonakalo.
“Umoya obuvunguza ngamandla ubheke entshonalanga yiwona obuthusa kakhulu izakhamuzi zakule ndawo.
Lo mlilo ulandela isehlakalo esalimaza imizi engu-600 ngesikhathi kusha indawo yaseKnynsa. Kulesi sehlakalo abantu abalinganiselwa ku-10 000 basala dengwane bengenawo amakhaya kanti futhi kwashona abantu abayisikhombisa okubalwa kubo nevolontiya elalisiza ukucisha umlilo.